အရှေ့တစ်ဝက်ပိတ်အပြန့်သရ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Close-mid front unrounded vowel မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အရှေ့တစ်ဝက်ပိတ်အပြန့်သရ (အင်္ဂလိပ်: close-mid front unrounded vowel သို့ high-mid front unrounded vowel) သည် အပြောဘာသာစကားများစွာတွင် အသုံးပြုသော သရသံ အမျိုးအစားများထဲက ပုံစံတစ်ခုဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအက္ခရာတွင် ⟨e⟩ (အေ) သင်္ကေတဖြင့်ပြသည်။
အရှေ့တစ်ဝက်ပိတ်အပြန့်သရကို Lower-Case E ဟူ၍လည်း ခေါ်တွင်နိုင်ပြီး bake, say, eight, face စသော စကားလုံးမျမှ သရသံ (အေ) ကို ဖလှယ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤသရသင်္ကေတသည် လုံးချင်းသရတစ်ခုဖြစ်၍ ဗြိတိသျှ၊ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်စကား၌ သရတွဲသံ eɪ အဖြစ်ထွက်လေ့ရှိကြသည်။ ခေတ်ပေါ် အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်အချို့တွင်လည်း (အေ, အေး) သရသံကို eɪ အဖြစ် ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိကြသည်။ ဗြိတိသျှအများလက်ခံအသံထွက် (RP) တွင် အစဉ်ဆက်သဘောနှင့် အဆင်ပြေစေမှုအရ နိုင်ငံတကာသုံး ⟨e⟩ အက္ခရာကို ⟨ɛ⟩ (အယ်, အဲ) အဖြစ် သုံးစွဲကြသည်။ နမူနာအားဖြင့် bed ကို [bed] အဖြစ် ဖလှယ်ရေးသားကြ၏ ။
မြန်မာစကားတွင် ပေ ၊ ပေး ၊ ပိတ် အစရှိသော စကားလုံးများမှ သရသံကို ဤအက္ခရာ ဖြင့်ဖလှယ်ရေးသားနိုင်သည်။ ဥပမာ ပေ ကို [pe] ၊ ပေး ကို [`pe:] ၊ [pé] ဟူ၍ အသီးသီး ရေးသားနိုင်ကာ ပိတ် ကို သရတွဲသံ eɪ အသုံးပြု၍ [peiʔ] အဖြစ် ဖလှယ်ရေးသားနိုင်သည်။ အသံထွက်ရာတွင် မြန်မာတို့သည် အခြေခံသရပါ အမှတ် (၂) ဖြစ်သော ⟨e⟩ ထက် အနည်းငယ်ပို၍ ပွင့်ပြီးထွက်လေ့ရှိကြသည်။ [peiʔ] ကို မြန်မာစကားတွင် ထွက်ရှိရာ၌ အင်္ဂလိပ်စကားတွင်ကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ခပ်ပြတ်ပြတ် ထွက်ရှိသည်။ ⟨e⟩ သရသံမှ ⟨i⟩ သရသံသို့ လျှာချက်ချင်းပြောင်း၍ ထွက်ရှိ၏ ။
↑ Linda I. House (1 February 2013)။ Introductory Phonetics and Phonology: A Workbook Approach။ Psychology Press။ pp. 34–35။ ISBN 978-1-134-99568-4။
↑ Wells၊ John C (1982)။ Accents of English, Volume 1: An Introduction (pp. i–xx, 1–278), Volume 2: The British Isles (pp. i–xx, 279–466), Volume 3: Beyond the British Isles (pp. i–xx, 467–674)။ Cambridge University Press။ ISBN 0-52129719-2, 0-52128540-2, 0-52128541- |isbn= တန်ဖိုး invalid character စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)။ RP transcriptions use ⟨e⟩ rather than ⟨ɛ⟩ largely for convenience and historical tradition; it does not necessarily representadifferent sound from the General American phoneme, although the RP vowel may be described as somewhat less open than the American one no-break space character in |title= at position 51 (အကူအညီ)
↑ L. E. Armstrong and Pe Maung Tin (1925)။ A Burmese Phonetic Reader: With English translation။ The London Phonetic Readers။ London: University of London Press။ehasaposition slightly more open than Cardinal Vowel No. 2; "ei" (chief subsidiary member of the e-phoneme). Beforeeis replaced byanarrow diphthong 1 "ei", which is similar in quality to that is used by many English speakers in pronouncing eight , etc., but is much shorter than this sound. In "ei" the initial position isalittle lower than fore(described above), the tongue immediately gliding from this position to i.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အရှေ့တစ်ဝက်ပိတ်အပြန့်သရ&oldid=706928" မှ ရယူရန်
CS1 အမှားများ: invisible characters
ဤစာမျက်နှာကို ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။